Social Media na ihe ịga nke ọma: Cutting vs Prolonging | Martech Zone
Imirikiti nke ire ahịa na-agbadata n'omume abụọ, ịcha na ịgbatị oge. Dị ka anyị na-ahụ a ahịa atụmatụ ọkpọọ na-arụpụta obere pụta, na ngwa ngwa anyị bee… mma anyị n'ozuzu atụmatụ anamde. N'otu aka ahụ, dịka anyị na-ahụ atụmatụ na-eweta nsonaazụ dị ukwuu… anyị na-agbasi mbọ ike ịgbatị nsonaazụ ya.
Dịka ọmụmaatụ, m na-anwa ime nke a kwa ụbọchị na blog. Mgbe m chọpụtara na ha dị ọtụtụ Facebook masịrị ma ọ bụghị ọtụtụ Twitter retweets, Aga m agbanye ya ọzọ. Ọ bụrụ na m hụ ọtụtụ mmeghachi omume site na Twitter na Facebook, Aga m agbanye ya na StumbleUpon. Mgbe m hụrụ isiokwu ahụ ka ọ na-eto nke ọma, aga m ede ihe banyere isiokwu ahụ, ikekwe hazie oge Redio Tech Tech gosi banyere ya, ma ọ bụ ọbụna hazie vidiyo.
Otu ụzọ m hụrụ n'ezie na blọọgụ bụ mgbakwunye nke ọtụtụ ahịa infographics. Saịtị ahụ toro n'etiti 10% na 15% karịa ọnwa ole na ole gara aga na njirimara ndị ọzọ. N'ihi ya, anyị enwetala ọkwa maka ha ma anyị na-etinyezi ndị na-ese ihe nkiri iji zụlite nke anyị. Nke kacha ọhụrụ na kedu ka mkpanaka si emetụta ecommerce bụ echiche m nwere mgbe m gụsịrị akwụkwọ akụkọ… yabụ na anyị enweghị nyocha!
Oge bụ isi ihe dị mkpa maka ire ahịa ọwa ahịa, yabụ ogologo oge ị nwere ike ime ka atụmatụ a ma ama dịkwuo mma, ọ ga-akawanye mma na nsonaazụ mkpọsa gị. Anyị anaghị ahụ nke a n'ịntanetị, anyị na-ahụ ya na ntanetị. Ọ bụrụ na azụmahịa resonates na-ege ntị… dị ka Flo, Nwanyị Na-aga n'ihu, anyị na-ahụ usoro mgbasa ozi na Lady na-aga n'ihu.
Ọ bụghị naanị na ịzụ ahịa, ma. Ọ bụ eziokwu na ndụ na anyị kwesịrị iwepụ ihe ọjọọ ma mee ka ezi ihe dị ogologo. Achọrọ m ịkwụsị otú m si eri nri, mụtakwa otú m ga-esi na-emega ahụ́ n’oge. Na ọrụ, achọrọ m ibepụ ndị ahịa na-anaghị ege anyị ntị ma ọ bụ nweta nsonaazụ, ma gbalịsie ike na ịgbatị mmekọrịta ahụ na ụlọ ọrụ ndị na-ege ntị ma na-aga nke ọma.
Laghachi azụ ahịa.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị maara nke ọma na ntụsara ụfọdụ ahịa na-eme ka ha ghara ibelata ha… ọbụlagodi mgbe ha na-ada ada. Echere m na ọ bụ usoro okike site na ndị ahịa na-enwe nkasi obi na ndị na-ajụ ase. Uche ha ka emechiri emechi na uzo ozo. Ndị na-ere ahịa email dabere na email, ndị na-ere ahịa ọchụchọ na-adabere na ọchụchọ, ndị na-ere ahịa mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ na mgbasa ozi… ọ bụ ajọ gburugburu nke na-agaghị agwụ agwụ na mkpọsa okpu na ọtụtụ ego furu efu.
Kama nke ahụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị a attentiona ntị na ya nchịkọta ma ghara ịghọta ihe na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe na-adịghị. Ha anaghị agbatị mbọ ọ bụla n’ozi ha. Mgbasa ọ bụla na-amalite site na ncha n'enweghị nlekọta n'ụwa. Nke a na-eme ka ha ghara inwe ike iji ike ha nwere na mbụ.
Social media na-enye anyị ụzọ nke prolonging ọ bụla mkpọsa. Dị ka David Murdico ekwuru m banyere usoro ịzụ ahịa vidiyo na ihe ngosi redio ikpeazụ, anyị kwuru banyere otu ihe ịtụnanya na ịnwela ndị otu na ndị na-eso ụzọ ya. Ka ị na-eto mmekọrịta gị na ndị na-eso ụzọ gị na ndị na-eso ụzọ gị, ị na-etinye ego na ihe ịga nke ọma nke mkpọsa gị na usoro ịre ahịa gị.
Na isi, na ulo oru mbo na a na-elekọta mmadụ na-esonụ na-prolonging gị ọzọ mkpọsa… tupu ị na mgbe zubere ya bụ igbu! Ọ bụrụ na ị nwere ndị na - eso ụzọ 100,000 nọ ebe a na - ege ntị ma nye gị ikikere ịkpọtụrụ ha, kedu ka nke ahụ ga - esi gbanwee mkpọsa ahịa gị ọzọ? Enwere m olileanya na ọ bụ ihe ị na-eche banyere ya.
Tags: akwụkwọ ahịaChọọ MarketingWordPress